Cunista hilibka dameerka oo noqday cuntada ugu wanaagsan ee maalqabeenada Khaliijka – SBC
Cunista hilibka dameerka oo noqday cuntada ugu wanaagsan ee maalqabeenada Khaliijka
Cairo:-Wargeysyada ka soo baxa dunida carabta ayaa maalmahan si aad u daabacaya warar ku aadan in gooraca iyo iibinta hilibka dameerka uu lamid noqday sidii hilbaha lo’da oo kale dalal ay kamid yihiin Aljeeriya, Masar, Tunisia iyo qaar kamid ah dowladaha gacanka carabta.
Inkastoo mas’uuliyiinta caafimaadka badankood ay si aad ah u beeninayaan wararkaas, balse waxaa sii kordhaya hadal haynta bulshada dhexdeeda wararka la xiriira cunista iibinta hilibka dameerka gaar ahaan baararka waa weyn ee sida aadka ay uga helaan cuntada lagu kariyo maalqabeenada dowlada khaliijka.
Wargeys ka soo baxa Kuwait ayaa soo daabacay warbixin uu ku sheegayo in dowlada hoose Kuwait ay gacanta ku dhigtay hilibka dameerka oo lagu iibinayo mid kamid baararka ugu caansan dalkaas.
Wargeyska ayaa warbixintiisa intaas ku daray in maamulka baarka uu isku dayey in uu qariyo warka si aysan waxyeelo uga soo gaarin kaliyantiga ama macaamiisha kale ee ku xiriirka la leh baarka .
Guddoomiyaha dowladda hoose Kuwait Engineer Axmed Al-sabiix ayaa sheegay in dowladda hoose ay sameenayso inta awoodeeda ah badbaada muwaadiniinta, gaar ahaan arrimaha la xiriira iibinta hilbaha qurunka ah islamarkaana ay jiraan kormeerayaal ka socda laamaha kala duwan ee dowladda hoose oo wada baaritaano ku aadan hilbaha lagu gado suuqyada iyo baararka waa weyn.
Dhanka kale warbixino laga helayo dalka Tunisia ayaa sheegaya in hilbaha dameerka si aad ah looga jecel yahay xaafadaha isku raranka ah oo ay degan yihiin dadka fuqarada kuwaasi iyadoo lagu iibinayo qiimo kajaban hilbaha kale.
Kuma koobna oo keliya dalalka Tunisia iyo Kuwait wadamada sida laga cuno hilibka dameerka , waxaa sidoo kale wargeys lagu magacaabo Al-shuruuq oo ka soo baxa dalka Aljeeriya uu qoray in suuq lagu magacaabo Al-dawaab lagu gooraco dameeraha iyadoo dhaqaatiir ay baaritaan ku sameeyaan caafimaadka dameerka la gooracayo.